Maxaad kala soocotaa sharciyadda cusub ee hir galaya maanta oo koowda bisha luulyo? | Somaliska
Maxaad kala soocotaa sharciyadda cusub ee hir galaya maanta oo koowda bisha luulyo?
Sharciyo cusub ayaa maanta oo bisha toddobaad ay tahay koow, waxaa dalkaan Iswiidhan ka dhaqan galaya sharciyo cusub, Sharciyadda dhaqan gelidoona maanta oo sabti ah taariikhduna tahay kowda bisha toddobaad sanadka 2017-ka, waxa ka mid ah in is bedel lagu sameeyey sharciyo dhawraaya xuquuqda dadka warbaahinta soo gaadhsiisa fadeexadaha ka dhaca shaqooyinkooda. Sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka ka hawl gala shirkadaha gaarka loo leeyahay, balse lagu maalgeliyo lacagta cashuurta dad weeynaha in ay soo bandhigaan dhibaatooyinka ka jira shaqooyinkooda iyaga oo dalban kara in aan la sheegin kuwa ay yihiin.
Sharciyadan cusub waxa kale oo ka mid ah sharci u fududaynaya dadka in ay bedelaan magacyadooda. Sharcigan waxa uu ogolaanayaa in qofka magaciisa bedeli karto marar badan isaga oo aan la weeydiinayn wax sabab ah.
Sidoo kale dhammaan dhallin-yarada dhalatay laga soo bilaabo sannadkii 1999 iyo wixii ka dambeeyey ayaa dib loogu soo nooleeyn doonaa howlaha shaqada qaranka laga bilaabo koowda bisha luulyo ee sannadkan. Iyadoona wixii laga bilaabo 2018 ey dib u geli doonaan howlaha shaqada qaran. Dhalinyaradan ayaa ka qeeyb qaadan doona tabar milateri iyo xiisada maclumaadka difaaca wadanka.
E-cigaretter (Ii sigaar)
Waxa kale oo caruurta 18 ka yar laga mamnuucay dhuuqida ama cabida sigaarka laydhka ee afka iswiidhishka lagu yidhaahdo E-cigaretter. Isla markaa sigaargan waa in lagu qoro digniin lagu sheegayo in uu caafimaadka u daran ayahay.
Farriimmaha qoraaladda ee sms-ka
Waxa kale oo ka mid ah sharciyada dhaqan gelaya in haayadda caafimaadka degdega ah ee SOS loo ogalaaday in ay fariimo u diri karaan dad weeynaha hadii ay dhacdo arrin khartar ku ah dad weeynha sida weerar argagixiso. Fariimahan ayaa loo diraayaa dhamaan telefoonnada ka diiwaan gasha meesha dhacdo khartar ku keenaysa dad weeynaha ka jirto.
Xeerka cusub ee magaca
Malaha waa in kumaankun oo sannadood dib loogu noqdo si jawaab sugan su’aasha ah goorma ayaa la bilaabay in magac lala baxo? – waa haddiiba ay su’aashaasi jawaab leedahay. Hase yeeshee waxaa 1-da bisha luulyo ee sannadka hir-geli doona xeer lagu sahlayo magacyada sida lagu qaato ama lagu bedelan karo. Xeerkani ayuu tusaale ahaan uu macnihiisu yahay magaca reerka ee sida tooska ah loo qaato kolka uu ilmuhu dhasho ama la soo kaxeeysto ilmaha la korsaneyo is-bedel lagu sameeyo. Waxaa la sharciyeeyay in dhammaan magacyada reerka ey ku yimaadaan iyada oo la dalbado magaca la dooneyo in la yeesho, isla-markaana suurtagal loo heli karo in dhowr magac la qaadan karo. Waxaa sidoo kale la fasaxay in la qaadan karo magacyada reerka ee inta badan Sweden laga isticmaalo oo horay u xanibnaa. Magacyada sidoo kale waxaa la bedelan karaa intii jeer ee la doono iyada oo aan wax sabab ah la is weeydiin sidii ey horay u ahayd.
Wakaaladda canshuuraha ee Skatteverket ayaa lagu mideeyey howshaa si loo sahlo.
Ka wada shaqeeynta ammaanka
Ciidanka ammaanka ayaa suurtagal loo siiyey wada-shaqeeyn ey la yeeshaan waddammada dibadda iyada oo la hir-gelineyo dhabba-tuskii xeerka EU, waa xeer kale oo hir-geli doona 2-da bisha luulyo ee sannadkan. Xeerkan ayuu macnihiisu yahay in ciidanka ammaanka ay wada.-shaqeeyn dhex-mari karto hayadaha waddammada dibadda iyada oo la raacayo go’aankii talada ee Prüm inuu taageero ka heli karo, isla-markaana wada-shaqeeyn la yeelan karo. Saraakiil ka howl-gasha waddammada dibadda ayaa suurtagal u yeelan kara iney howlahooda si rasmi ah dalkan uga qab-san karaan.
Howlo tijaabin ee faracyada iskuullada
Xeerakan ayuu macnihiisu yahay inuu masuul tacliineed ee qorshe xirfadeed ama dugsi sare ee masuuliyaddeedu saaran tahay maamullada degmooyinku loo suurtageliyo inuu heshiis kala saxiixdo si tijaabo ah farac iskuul iyada oo heshiis lagu wada geleyo inuu faraca iskuulkaasi fuliyo howlo tacliineed, kuwaasina oo salka ku haya tacliin xirfadeed ama maadooyin dugsi sare ee qayb ka ah manhajka wax-barashada ee deg-san. Xeerkan howlaha tijaabada faracyada iskuullada ayaa hir-geli doona 1-da bisha agoosto ee sannadkan, wuxuuna salka ku hayaa sannad tacliineedka 1-da luulyo 2018. Wuxuuna ku eg yahay bisha juun ee sannadka 2023.
Xadididaada dhaqaalaha waalidka lagu siiyo dhallaanka – ee waalidka dalka soo gala iyaga oo dhallaan ey la socdaan
Waalidiinta dalka ku cusub oo ey la socdaan dhallaan da’doodu ey kor u gaartay 2 sannadood waxey ugu badnaan xaq u leeyihiin 100 maalmood dhaqaalaha waalidka lagu siiyo barbaarinta dhallaanka, halka ey iminka ka tahay 480 maalmood. Sidoo kale waa xeer hir-geli doona 1-da bisha luulyo ee sannadka.
–Waxay kaalin wanaag-san tallaabadani ka qaadan doontaa sidii ey haweenka ajaaniibta ee dalka soo galey ula fal-geli lahaayeen bulshada iyo suuqa shaqada, sida ay sheegtay wasiiradda ceeymiska bulshada Annika Strandhäll, mar la soo ban-dhigayay gogol-dhiggii baarista ee xeerka. Xeerkan ayaa sidoo kale qabanaya qooyska dalka dibadda uga maqnaa in muddo ah.
Baarista da’da oo salka ku haysa howlaha dembi-baarista
Xeerkan awuxuu muhiimad ballaaran u leeyahay baarista dunuubta maadaama ey shuruucda ciqaabtu siyaabo kala duwan u qiimeeyso da’da uu jiro shakhsiga dembiga lagu soo oogey. Horraantii ayuu xeerkani ahaa mid uu codsigiisu ka soo yeeray xeer-ilaaliyaha guud.
–Xeerkan ayuu macnihiisu yahay in baaris oogada lagu sameeyn karo ee la xiriirta da’da uu shakhsigu jiro mar haddii uu tuhun ka yimaado si loo qiimeeyo heerka ciqaabta ee dembiga uu shakhsigu galey ama lagu tuhun-san yahay.
Is-waafajin xeerka Iweden iyo qaraarkii Dublin
Xeerkan oo hir-geli doona 1-da bisha luulyo ee sannadka ayaa ka dhigan in haddii abiil laga qaato go’aanka wakaaladda socdaalka iyo hayadda ammaanka iyo in shakhsi la tarxiilo iyada oo la tiigsanayo qaraarkii dablin, isla-markaana uu shakhsigu codsado in fulinta go’aankaa dib loo dhigo aan tarxiilkaa la fulin karin inta ay maxkamadda socdaalku go’aan ka soo gaareeyso dib u dhigistaa.
Xigasho: Raadiyo Iswiidhan
Gabadh u dhalatay qoyska boqortooyada Sweden
Magaalooyinka ugu nolosha fiican aduunka oo la soo bandhigay, kaalintee gashay Stockholm